Marvin / 30 / ကျား / အယ်လ်မီရီ-ဘူအီတန်, ဖလီဗိုလန်, နယ်သာလန် | Muslima.com
သင့်မူဆလင် ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ရှာဖွေလိုက်ပါ
အိမ်ထောင်မရှိသူများကို ယခုပင် ကြည့်ရှုပါ
မူဆလင်များအတွက် သီးခြားဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ပရီမီယံ ဝန်ဆောင်မှု
အဆင့်မြင့် မက်ဆေ့ဂျ်ပေးပို့ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရယူလိုက်ပါ
Cupid Media မှ ပံ့ပိုးထားသော ယုံကြည်ရသည့်ဆိုက်
Looking foragood spouse❤!
နောက်ဆုံး အသုံးပြုချိန် - လွန်ခဲ့သော ၁၂ လကျော်က
30 • အယ်လ်မီရီ-ဘူအီတန်, ဖလီဗိုလန်, နယ်သာလန်
ကျား / အိမ်ထောင်မရှိသူ / အိုင်ဒီ: 17285890
ရှာဖွေခြင်း မ 19 - 31 အတွက် - မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်, လက်ထပ်ခြင်း
အစ္စလာမ်ဘာသာ - ဆွန်နီ
I amaman who Loves to sport. I play football for almost my whole life.. beside that I fitness 1 or2timesaweek.. and I also like to jog or dance in my free time.
Happiness and friendship!
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု အကြောင်းပြချက်များအတွက် အသက်သည် ၂ ပတ်အကွာအထိ တိကျပါသည်
အယ်လ်မီရီ-ဘူအီတန်, ဖလီဗိုလန်, နယ်သာလန်
ခန္ဓာကိုယ် စတိုင် -
အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေ -
(နောက်ထပ်) ကလေးလိုချင်ခြင်း -
အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ -
နေထိုင်မှု အခြေအနေ -
နောက်ခံ / ဓလေ့ထုံးတမ်း တန်ဖိုးများ
ပြောသော ဘာသာစကား -
မွေးရာပါ / ပြန်ပြင်ထားခြင်း -
ဘာသာရေး တန်ဖိုးများ -
ဘာသာရေး ဝန်ဆောင်မှုများသို့ တက်ရောက်ခြင်း -
ဂျမ်မာ / သောကြာနေ့များတွင်သာ
ခေါင်းမြှီးခြုံခြင်း (မျက်လုံးဖော်) -
ခေါင်းမြှီးခြုံခြင်း (မျက်နှာဖော်) -
မိသားစု တန်ဖိုးများ -
ဘေးကင်းရေး လမ်းညွှန်ချက် - သင်အချစ်စစ်ကို ရှာတွေ့အောင် ကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရှိနေပါသည်။
သင့်အချိန်သည် တန်ဖိုးရှိပါသည်။ ပရိုဖိုင်မရှိသင့်သော မည်သူကိုမဆို တွေ့ရှိဖယ်ရှားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးပါ။ သင့်ထံသို့ spam မက်ဆေ့ဂျ်များပို့သူ၊ လုပ်ငန်းကြော်ငြာသူ သို့မဟုတ် အချစ် သို့မဟုတ် မိတ်ဖွဲ့မှုကို ရှာဖွေရာတွင် အစစ်အမှန် မဟုတ်သူ မည်သူကိုမဆို ယင်းတို့၏ ပရိုဖိုင်ပေါ်ရှိ "အနိုင်ကျင့်မှုကို တိုင်ကြားမည်" အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် တိုင်ကြားလိုက်ပါ။
» ဘေးကင်းရေး အကြံပေးချက်များကို ပိုမိုရရှိရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ အောင်မြင်မှု ဇာတ်လမ်းများ အခြားဆိုက်များ အသုံးပြုရန် စည်းကမ်းချက်များ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက် ကွတ်ကီး မူဝါဒ ချိန်း၍တွေ့ဆုံရာတွင် ဘေးကင်းမှု ဆိုက်မြေပုံ အသိုင်းအဝိုင်း လမ်းညွှန်ချက်မျာ ကော်ပိုရိတ် စီးပွားဖက်များ
Cupid Media၊ Cupid Media လိုဂို နှင့် Muslima.com တို့သည် Ecom Holdings Pty Ltd မှ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်သွယ်ရေး အမှတ်တံဆိပ်များ ဖြစ်ကြပြီး Cupid Media Pty Ltd မှ ခွင့်ပြုချက်အရ အသုံးပြုထားပါသည်။
အသက် 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
သင်သည် အက္ခရာများ သို့မဟုတ် နံပါတ်များကို (စာလုံး ၈ - ၂၀) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ - ပိုမိုလုံခြုံစေရန်အတွက် သင့့်စကားဝှက်အသစ်ကို သင့်အီးမေးလ် စကားဝှက်နှင့် မတူညီအောင် ပြုလုပ်ထားပါ။
ဟုတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီဖြစ်ကာ အသုံးပြုရန် စည်းမျဉ်းများ နှင့် ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ဖော်ပြချက် တို့ကို သဘောတူပါသည်
Facebook ဖြင့် အကောင့်ဝင်မည်
သင့်သတင်းအချက်အလက်အား ဘေးကင်းစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကတိပြုပါသည်။ သင့် Facebook စာမျက်နှာတွင် မည်သည်ကိုမျှ ပို့စ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် မျှေဝေခြင်း ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
သင်ဆိုလိုသည်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသလား -